सिमेण्ट उद्योगले बजारबाट १ खर्ब रुपैंया उधारो उठाउन बांकी
सिमेण्ट उद्योगले बजारबाट १ खर्ब रुपैंया उधारो उठाउन बांकी धुब्रराज थापा-अध्यक्ष, नेपाल सिमेण्ट उद्योग संघ
जनतापाटी आइतबार, फागुन १६, २०७७ मा प्रकाशित
पछिल्लो समयमा सिमेण्ट उद्योगहरुको अवस्था कस्तो छ ?
-हामीले भनिरहन नै पर्दैन, सबै कुरा तपाईहरुलाई थाहा छदैंछ । एकपछि अर्काे गर्दै समस्याहरु थपिइरहेका छन् । त्यसले गर्दा स्थिति बेहाल भैरहेको छ ।
निर्माणका कामहरु त भैरहेकै छन्, त्यसबाट सबैभन्दा फायदा त सिमेण्ट उद्योगहरुले पाइरहेका छन नी, होइन र ? अनि कसरी बेहाल ?
-सोझो तरिकाले हेर्दा तपाईले भनेको जस्तो हो पनि । हामीलाई पनि लागेको थियो–भुकम्प लगत्तै पुनःनिर्माणको काम शुरु भयो । नयां सविधान जारी भयो, निर्वाचन भएर स्थायी सरकार बन्यो । राजनीतिक पार्टीहरुले पनि विकासको एजेण्डालाई नै प्राथमिकतामा राखे । त्यसले गर्दा लौ अब त औद्योगिक अवस्था सुधार भयो, देशको विकासले गति लिने भयो भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो । त्यहीकारण उद्योगहरु धमाधम खुले । तर, अवस्था त्यस्तो भएन ।
काम हुंदै नभएको होइन, केही कामहरु भैरहेका छन् । तर, हुनु पर्ने जति भएन । तपाई नै हेर्नुस् न सरकारको विकास बजेट कति छ ? विनियोजित विकास बजेट मध्ये कति प्रतिशत प्रतिशत खर्च भैरहेको छ ? जब सरकारको विकास बजेट नै राम्रोसंग खर्च हुंदैन भने आर्थिक अवस्थामा कसरी सुधार आओस् ? सिमेण्ट उद्योगको मात्रै होइन, सबैको अवस्था त्यस्तै हो ।
सिमेण्टमा त नेपाल लगभग आत्म निर्भर भैसकेको छ, तर पनि उद्योगहरु खुलिरहेका छन्, यसले भविश्यमा कस्तो असर पार्ला ?
-आत्म निर्भर मात्र होइन, उद्योगहरु पूर्णरुपमा चल्ने अवस्था भयो भने नेपाललाई आवश्यक पर्नेभन्दा दोब्बर उत्पादन हुन्छ । त्यसले गर्दा अवको अवस्था सहज छैन । तर, यदि विकास प्रकृया दीगो रुपमा अगाडि बढ्यो र स्थिति सहज बन्यो भने हाम्रो सिमेण्ट भारतमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । भारतमा सिमेण्टको ठूलो माग छ र उनीहरुको लागि पनि हामी कहांबाट सिमेण्ट आयात गर्न सरल र सहज छ । त्यसैले सिमेण्ट उद्योग चल्नै नसक्ने भन्ने होइन, तर स्थिति सहज हुनु पर्यो । तर, अहिलेकै अवस्थामा चांही भएकै उद्योगहरु पनि बेहाल हुन्छन्, भैरहेका छन् ।
अहिलेको राजनीतिक परिवेशले आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो असर पारिरहेको छ ?
-अहिले नै त्यस्तो खासै असर पारेको छैन । किनकी के हुन्छ भन्ने यकिन भैसकेको छैन । तर, राजनीतिक अवस्था सहज भएर काम हुन्छ कि, विकास निर्माणको प्रकृयाले गति लिन्छ कि भन्ने आश जगाएको बेला शुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले हामीलाई चिन्तित त बनाइहाल्छ नी ।
चन्दा आतंक बढ्छ भन्ने पनि चिन्ता होला होइन ?
-चन्दा आतंक आफ्नो ठाउंमा छ । मुख्य कुरा हाम्रो समस्या कसैले पनि बुझिरहेको छैन, बुझ्न चाहिरहेको छैन । उद्योग र व्यापार बीचको फरक नै कसैले छुट्याउन खोजिरहेको छैन, त्यो चांही हाम्रो लागि मुख्य समस्या हो ।
तपाई कुनै पनि कुराको व्यापारको लागि ठूलो लगानी चांहिदैन, तयारी पनि ठूलो गर्नु पर्दैन । वन्द गर्नु पर्दा पनि गाह्रो हुदैंन । तर, उद्योगको कुरा त फरक हुन्छ । अर्वाैं लगानी हुन्छ, सयौं, हजारौं मानिसहरुले रोजगारी पाइरहेका हुन्छन् । त्यसैले खोल्न मात्रै होइन, वन्द गर्न पनि सहज हुदैन । त्यसैले अरु देशमा उद्योग र व्यापारलाई फरक ढंगले हेरिन्छ र उद्योगीलाई त्यही अनुसार व्यवहार गरिन्छ । तर, यो कुरा कसैले महसुस गरेको देखिदैंन । उद्योगीलाई गर्ने व्यवहारमा कुनै फरक हुदैन । एउटा सामान्य व्यापारी बराबर व्यवहार गरिन्छ । उद्योगिका समस्या बुझ्न नसक्दखा त्यसले के असर गरिरहेको छ भन्ने बारेमा कुनै पनि पक्षले विचार गर्न सकिरहेको छैन ।
सिमेण्ट उद्योगको एउटा मुख्य समस्या उधारो पनि हो, ठूला ठूला ठेकेदारहरुले पनि सिमेण्ट उद्योगसंग उद्यारोमा ल्याएर पैसा तिर्दैनन् भन्ने सुनिन्छ, वासतविकता के हो ?
-उधारोको कुरा त के गरिसक्नु ? ठूला र अलि प्रतिष्ठित ठेकेदारहरुले त २,४ दिन तलमाथि गरे पनि तिर्छन् । सामान्य खालका ठेकेदार र त्यो भन्दा पनि बढी डिलरहरु समस्यामा हुन् । मेरो अनुमानमा सिमेण्ट उद्योगहरुले बजारबाट १ खर्ब भन्दा बढी उठाउन बांकी छ ।
१ खर्ब कि १ अर्ब ?
-१ अर्ब होइन, १ खर्ब हो । १ खर्ब । करिब करिब त्यति रकम उद्यारो उठाउन वांकी होला । अनि हेर्नुस् त कसरी चल्न सक्छन्, उद्योगहरु ?
असुलीको लागि केही प्रकृया त गर्नु भएको होला नी, के भैरहेको छ ?
-हामीले के गर्नु ? जबसम्म सरकारले उद्यारो कारोबारलाई पनि चेक वाउन्स जस्तै कडा गर्ने गरि कानुन ल्याउँदैन, तब सम्म स्थिति सुधार हुदैंन । त्यसैले उधारो कारोबारलाई पनि चेक वाउन्सलाई जस्तै कडा कानुन चाहियो भनेर माग गरिरहेका छौं ।